Wafdigii uu Hogaaminayay Madaxweeynaha Soomaaliya oo si Diiran loogu soo Dhaweeyay Dalka Jabuuti | Somali - Diaspora
Isniin, November 26, 2012 (MMG) —Wafdigii uu hogaaminayay madaxweeynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Max’uud ayaa maanta gaaray dalka Jabuuti, iyadoona halkaasi ay si diiran ugu soo dhaweeyeen madaxda dalkaasi.
Madaxweeynaha ayaa safarkiisa waxa ku wehlinayay wasiirka gaashaandhigga mudane C/xakiim Max’uud Xaaji Fiqi, Xildhibaan ahna la taliyaha madaxweeyanaha Faarax Sheekh C/qaadir iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan.
Wafdiga madaxweeynaha ayaa markii ay gaareen garoonka magaalada Jabuuti waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay Madaxweeynaha Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle, wasiirro iyo madax katirsan dowladda Jabuuti.
Madaxweeynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Max’uud ayaa salaam sharaf ka gudoomay ciidamada baambeeyda dalka Jabuuti, waxaana intaas kadib madaxweeynaha iyo wafdigiisa loo galbiyay xarunta madaxtooyada dalka Jabuuti, halkaasoo uu kulan kula qaatay dhigiisa dalka Jabuuti.
Labadani masuul ayaa kulan kooda uga wada hadlay xiriirka labada dal iyo arimo la xiriira ciidamada jabuuti ee qeybta ka ah kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya.
Shir jaraa’id ay oo ay kulanka kadib si wadajir ah u qabteen labada masuul ayay sheegeen in kulankooda ay uga wadahadleen arimo ku saabsan xiriirka labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa.
Safarka uu madaxweeynaha Soomaaliya ku tagay dalka Jabuuti ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee uu ku aado dalka dibadiisa tan iyo intii uu madaxweeyne ka noqday dalka Soomaaliya, waxaana la filayaa in madaxweeynaha iyo wafdigiisa ay usii gudbaan dhanka Itoobiya.
Djibouti: Somalia ha loo Uruuriyo Dhaqaale Dib loogu Dhiso
Kalfadhigii 39aad ee Wasiirada Arrimaha Dibadda ee Wadamada Ururka Iskaashiga Islaamka oo maanta ku soo gabgaboobay magaalda Jabuuti, ayaa dowlada Djibouti waxay ku baaqday in la qabto shir gaar ah oo dhaqaale loogu uruurinayo dib-u-dhiska Soomaaliya.
Jabuuti oo mudaba ku howlaneed gacansiinta Soomaaliya, ayaa sheegtay in Soomaaliya aaney u baahneyn oo kaliya lacag yar oo goos goosa, balse ay u baahantahay in caalamku uu bixiyo malaayiin doollar oo dib loogu dhiso Soomaaliya.Wasiika Arrimaha Dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa Wriyaha VOA ee Jabuuti Ramadaan Muuse waxa uu uga waramay arrinta dib-u-dhiska Soomaaliya.
Baarlamaanka Soomaaliya oo u yeeray wasiirada gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda Soomaaliya, kana dalbaday inay jawaabo cad bixiyaan… Midowga Yurub oo sheegay inay si toos ah ula macaamilayaan dowladda Soomaaliya